Ọnọdụ mkpali TOP 100 maka afọ 2020 - Pedia kwuru
108 ruturu na okwu
Na ndụ, anyị na-ahụ ụdị ọnọdụ dị iche iche siri ike. O siri ezigbo ike ịnabata ihe ọ bụla na-abịa n'ụzọ anyị; na mgbe ị na-ahụ nsogbu dị n’ihu, ọ na - adị gị ka ụkwụ gị ọ̀ na-ama jijiji ma ị naghị enwe ntụkwasị obi ahụ n’ime onwe gị.
Iji zute ọnọdụ ma nọgide na-aga n'ihu, ịkwesịrị inwe mkpali ahụ, n'oge nke oge a mgbe ihe niile abụrụla nkwekọrịta n'ihe bara uru ma ọ bụ ọnụ ahịa, ọ bụ ihe siri ike ịchọta onye ndụmọdụ ga-eduzi gị n'ụzọ.
Ọnọdụ mkpali nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ iji nye ndị mmadụ ihe ọmụma. O nwere ike ịbụ na ha na-ama okwu ndị ahụ na ihe ndị e hotara na mbụ mana oge ị ga-ahụ ihe ndị a, ọ dị ka ọ bụrụ na echetara gị ihe ndị ahụ ọzọ.
Naanị mkpụrụokwu ole na ole na nnukwu echiche niile ka na-eche otu. Might nwere ike ịmaworị maka ya mana onye ga - amata ma onye ọ bụla nọ na kọntaktị gị chọburu ihe ọjọọ na ya ugbu a.
Ihe ndị a anyị kwuru ga-eme ka ị ghọta isiokwu nke ọma, ma akụkụ kachasị mma gbasara echiche ndị a bụ na ha anaghị egbochi gị iche naanị n'otu akụkụ. Kama, imalite imata gbasara ihe dị n'akụkụ niile.
Start bido inwe nchekwube karịa ma bido icheta eziokwu na ndụ adịghị mfe oge niile, mana ezigbo nwoke kwesịrị iche nke ọ bụla anya dịka otu anyị kwesịrị isi gụọ akụkụ nke ọ bụla na ndụ anyị na-enweghị. inwe ike ikwu onye ọ bụla n’ime ha.
Mgbe ichotara a ọnọdụ mkpaliị ga-enweta obi ike. Naanị iche na ị kwenyere n'ihe na ị na-achọsi ya ike, ugbu a oge ọ bụla ụdị ọ bụla na-egosi mmụọ nsọ, ọ ga-adịkwuru gị mfe ịme ihe ndị ahụ.
Ọ na-eme ka obi sie gị ike na onwe gị na ọ bụrụgodị na o siri ike ịhụ ya, ọ dị ka ọ nweghị ihe ọ bụla ọzọ. Brainbụrụ anyị kwesịrị ka a na-akpali ya mgbe niile, na-agụkwa ihe ndị ahụ okwu mkpali ga - enyere gị aka wepụta ụbụrụ gị ka ị rụọ ọrụ ọzọ.
Obi na-ajọ gị njọ, ka ị na-elekwasị anya n'ihe mgbe ị mala na ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ ka mma n'aka gị. N'ụdị ọnọdụ a, ịnwere ike ịhọrọ ịga mgbe ọ bụla ga - agbanwe ihe ị na - elekwasị anya ma gbanwee ihe kpatara obi nkoropụ gị n'ọ joyụ n'oge na - adịghị oge.
Echegbula. Oge ahụ agaghị abụ nke ziri ezi. - Napoleon Hill
Iche icho bu otu n’ime ihe akacha n’iru mmadu. Dị ka ụmụ mmadụ, ọtụtụ n'ime anyị chere ichere…
Never gaghị abụ onye iberibe ruo mgbe ị kwụsịrị ịnwale. - Mike Ditka
Onweghi eziokwu dị n’edemede karịa eziokwu ahụ bụ na ịrụsi ọrụ ike na-erite uru nke ya. Ndụ bụ…
Ekwela mgbe ihe ghazuru gi isi gi ma ghara ikwe ka ọdịda gha abia gi n’obi. - Ziad K. Abdelnour
Ndụ na-abịa. Anyị niile nwere njem pụrụ iche nke na-eduga anyị na…
Only ga-ada naanị mgbe ị kwụsịrị ịnwale. - Amaghi
Oge ụfọdụ, anyị na-ewere onwe anyị dị ka onye dara ada ma bido iche dịka ànyị dị mma maka…
Ọ na-adị ka ọ gaghị ekwe omume oge niile. - Nelson Mandela
Ọ na-adị ka ọ gaghị ekwe omume oge niile belụsọ ma belụsọ ma ị nwere ike nweta ya. Anyị na-ajụkarị ...
Ọ bụrụ n’uche ị ga - eme ya, ị ga - emeli ya. - John Burroughs
Kwaa onwe gị, n'ihi na ọ nweghị onye ọzọ ga-emere gị ya. - Amaghi
Anyị maara na njikọta mmetụta uche bụ ihe mara mma. Ọ dịghị ihe nwere ike ịka mma karịa ịmachi mmadụ na…
Mgbe ụfọdụ emesịa bụrụ na ọ dịghị mgbe ọ bụla. Mee ya ugbu a. - Amaghi
Ọtụtụ mgbe, anyị na-ewere ya na anyị nwere ọtụtụ oge. Maka nke ahụ, anyị…
Anyị nwere ike ị nweta ọtụtụ mmeri mana anyị agaghị emerili anyị. - Maya Angelou
O nwere ike ịbụ na ị darala oge ụfọdụ ma ọ bụ ọzọ na ndụ gị. Eleghi anya agbajiri gi mebie gi…
Nsogbu anaghị akwụsị ihe ịrịba ama, ha bụ ụkpụrụ. - Robert H. Schuller
Mgbe ndụ nyere gị lemons, mee onwe gị lemonade. Na-edozi nsogbu ọ bụla na-abịa n'ụzọ gị dịka…
Kwere na ị nwere ike ma ị gafee ọkara ebe ahụ. - Theodore Roosevelt
Ikwere na onwe anyi bu ihe di nkpa na ndu anyi. Ọ bụghị naanị na-eme ka ọnọdụ uche anyị ka mma, mana…
Ọnweghị ihe agaghị ekwe omume. Okwu n'onwe ya na-ekwu "Enwere m ike!" - Audrey Hepburn
Ọgụgụ bụ onyinye kasịnụ nke mmadụ. Site n'enyemaka nke ihe ọmụma ha, ụmụ mmadụ nwere ike iru…
Etuputara onye mmeri obughi site na mmeri ha kama site na otu ha nwere ike isi gbakee mgbe ha dara. - Serena Williams
Anyị nwere echiche na a maara onye mmeri dị ka onye mmeri. Ikwu eziokwu, ma ọ bụrụ na imeri na…
Anyị na-ewepụta ụjọ ka anyị na-anọdụ ala. Anyị ji aka anyị merie ha. - Dr. Henry Link
N’ezie, egwu dị n’ime gị maka ihe dị ọhụụ nye gị. Tend na-achọ ịnọgide na…
M na-aga ije nwayọ, mana anaghị m aga azụ azụ. - Abraham Lincoln
A na-ekwu, "nwayọ nwayọ na mmeri n'ọsọ." Ee, nke ahụ bụ eziokwu. Dokwesighi ịgba ọsọ…
Ternyaahụ ka i kwuru echi. Naanị mee ya. - Nike
Mgbe mmadụ kwesiri ịrụ ọrụ ọ bụla, isi ihe ga - eme ya bụ iwepu iwepụ oge…
Ọ bụrụ n'ịchọrọ imeri ụjọ, echela n'ụlọ ma chee ya eche. Pụta ma banye ọrụ. - Dale Carnegie
N’agbanyeghi obi ike onye ahu di, anyi niile nwere ujo anyi. Ọ nwere ike na esiwe na…
Ndụ na-enye gị ohere nke abụọ. A na-akpọ ya echi. - Dylan Thomas
Cheta na ndu bu ezigbo onye nkuzi ma kuziere anyi otu esi eme ka ndu anyi ka nma…
Echela maka ohere kwesịrị ekwesị: Mepụta ya. - George Bernard Shaw
Na ndụ, ị gaghị enwe ike ịchọta ohere nke na-arụ ọrụ maka ọdịmma gị. N'oge ụfọdụ,…
I gha eme ihe i chere na ịgaghị eme. - Eleanor Roosevelt
Ọ dị mma, ọ bụrụ na anyị ebighi ihe ịma aka na ndụ anyị, enweghị isi ebe obibi. Nsogbu bụ…
Nrọ ya. Kwere ya. Wuo ya. - Amaghi
Dị ka mmadụ, ihe mbụ ikwenye bụ na nrọ gị ejikọghi…
Mee ihe ị nwere ike, ya na ihe ị nwere, ebe ị nọ. - Theodore Roosevelt
Ọ bụghị mmadụ niile nwechara ihe niile. Fọdụ na-ebi ndụ ha dị ka akụkọ ifo, ebe ndụ bụ hel maka ụfọdụ.
Ọ bụrụ na ikwere n’onwe gị ihe ọ bụla kwere omume. - Miley Cyrus
Ọgbọ anyị na-agba ọsọ mgbe niile n'ọsọ oke. Anyị na-ele ya anya dị ka agbụrụ ebe mmadụ niile nọ…
Gbanwee egwuregwu a, ekwela ka egwuregwu gbanwee gị. - Macklemore
Anyị niile setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ anyị chọrọ iru na ndụ. Iji nweta nke ahụ, anyị gafere…
Oké ifufe anaghị adịru mgbe ebighị ebi. - Amaghi
Lanahụ n’ụwa nke taa siri ike. Ya mere, anyị kwesịrị icheta ma na-eme ụfọdụ ezigbo ndụ iji lụso…
Enweghị m ike ịgbanwe ụzọ ikuku, mana enwere m ike ịgbanwe ụgbọ mmiri m iji rute ebe m na-aga. - Jimmy Dean
Anyị niile nwere ebumnuche doro anya na ndụ anyị. Iji mezuo ebe ahụ, anyị na-agbasi mbọ ike.…
Debe ihu gị mgbe niile ka anwụ na-acha, onyinyo ga-adakwa n'azụ gị. - Walt Whitman
Ọ dị mma, ịnwe ezigbo obi ụtọ na ndụ bụ ihe kacha mkpa. Anyị na-eme ihe niile ka anyị nwee ike…